Into yokuqala eheha indoda kumama ngokungangabazeki ukuzithemba, ngisho noma ukubukeka kwabesifazane kungekuhle, umbono omuhle ngaye, mhlawumbe ngisho nokuphakeme kakhulu, kwenza intombazane ikhangele amadoda.
Ngokufana namadoda, lapho intombazane ibonisa isithakazelo kuzo, futhi iyakubonisa ngokuzithandela. Kodwa "i-mean gold" ibalulekile, ngoba awudingi idumela elibi. Abanye besifazane, esikhundleni sokubuthana nokudlala ngothando, ukufihla ukuzwelana kwabo ngosizo lobudlova. Bahlekisa ngamadoda phambi kwabantu abajwayele ukuxoxa nabo, bakhuluma ngezwi elimangalisayo. Lokhu kuziphatha akunakwenzeka ukuheha umuntu kumuntu wesifazane.
Bonke abantu bakhangwa ngamantombazane athambile futhi abumnene, enenhlansi emehlweni abo, nokho abizwa ngokuthi yiyona evelele. Inkinga yukuthi amadoda azama ukugwema abalandeli abanokuzikhukhumeza, kodwa ngesikhathi esifanayo, iningi labo ngeke lithathe isinyathelo sokuqala, ungaqiniseki ukuthi linamathuba amancane. Noma kunjalo, yini eheha amadoda ukuba avele owesifazane.
Ikhanda lezinwele kufanele libukeke njengemvelo ngangokunokwenzeka, futhi ungadonseli ukubukeka komuntu kuphela, kodwa nesifiso sokuhamba ngezinwele zakho ngesandla. Noma kunjalo, amadoda afana nawo lapho izinwele zihlaba iphunga elimnandi. Ukukhetha umbala wezinwele, thintana no-stylist, ngoba izinguquko zamakhadikhadi azihlali kangcono ngaso sonke isikhathi.
Ungabeki namasongo enqwaba ezandleni zakho, amasongo ezandleni zombili akufanele abe ngaphezu kwezine. Ungakwazi ukuphuma ngamacici, ingaba yindilinga enkulu noma ihlukaniswe, bese uhamba nezingubo. Okubaluleke kakhulu, yonke imihlobiso endlini yangasese kumele ibe nenhlobo efanayo yezinto ezibonakalayo.
Izandla ezihlungiwe zihlale ziheha amadoda, njengalapho ephinda ahlukumeze. Ukuhlukahluka komkhakha we-nail kusenza sizame ngezithombe ezahlukene. Kodwa ungahlanganyeli kakhulu, njengoba siyazi, amadoda abathandi ngempela izipikili ezide zesidla, kahle, "amahlumela" anjalo abukeka kumavidiyo womculo kuphela.
Kungamazinyo. Makube yinqubo yensimbi kuwe, hlambulula amazinyo emva kokudla. Emva kwakho konke, akuyona into engathandeki kakhulu ukubona abesifazane besinezinkatha zokudla noma isidlo emazinyweni abo, ngisho noma beqhakaza.
Ukwenza imidwebo yemvelo kuyathandwa kakhulu kwabesifazane befesti hhayi ngeze. Ubhekwa njengento ekhangayo kakhulu. Amadoda afuna ukubona intombazane enobuhle bemvelo eceleni kwayo, hhayi idoli eqoshiwe, ongeke ukwazi ukumanga ngisho ngaphandle kokugoba ebusweni bayo.
Abaningi babo bonke abantu bakhangwa yiphunga elikhanyayo nelingenakuqhathaniswa elizovusa isifiso sokufika kuwe, kunokuhlala kude.
Okukhulu, izibuko kufanele zibe nezitayela. Ukweqa ngokweqile ukwesaba kude nawe kuphela amadoda, kodwa futhi nabantwana. Ngicabanga ukuthi izibonelo ezinezilwane ezahlukene akufanele zikhonjiswe. Enye iphuzu elibalulekile, kufanele uhambe ezibukweni, uqaphele kakhulu ukuthenga le ndawo yokufinyelela.
Noma kunjalo, abantu bathanda ukuthi bayothandwa, futhi bathembeke kukho konke. Ezingxenyeni eziphikisanayo, thola indlela yakho ngokukhala, kodwa ngokumomotheka okumnandi nokukhathazeka. Okuphezulu kobuciko bokuxhaphaza amadoda yikhono lokumkhohlisela endaweni yakhe yokubheka ukuze angaqapheli. Yisho ukuthi unomusa, unomusa futhi uzwela, emva kwesikhathi umuntfu ngokwakhe uzokukholwa futhi uzohambisana ngokugcwele nalesi sithombe. Ungazibongi, ikakhulukazi nabangani bakhe, ngakho-ke uzoba mnandi kuzo, ngisho nangaphambi kokuba lobu buhlobo bungabangezi. Amantombazane alula futhi avumelanayo avame ukuheha amadoda, aqede umkhuba wabo wokungabi namahloni.
Ngokuqinisekile unezimfihlo zakho ezincane ozisebenzisayo isikhathi eside. Yengeza kuzo zonke izeluleko zalesi sihloko, futhi impumelelo iqinisekisiwe.
Ukusebenza okwenziwe ngoMashi 8: Ukuthengiswa okungcono kakhulu okuthengiswa kakhulu ku-L'Oréal
Ingabe kuyingozi ukugqoka ubucwebe begolide?
Ukupheka Kokuhleka Kowesifazane Wanamuhla
Izwe elimnandi: amawayini aseFrance
Izinhlanzi zokunakekela isikhumba ebusweni
Indlela yokupheka imiqulu yenyama
Ithonya lezimbali ezempilo yabantu
Ukutheleleka kwe-Cytomegalovirus nokukhulelwa
Uma kungazelelwe umkakho akushiye
Ukubonakaliswa kwentukuthelo encane encane
Umzimba wangaphandle emaphethelweni emathunjini
Izidlo ezingu-8 ezivunyiwe yisayensi
Ukukhiqizwa kwezitshalo zasendlini nge-cuttings